5 Usuku Uhambo Ukusuka eRoma Ukuze Hlola Italy | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 5 Usuku Uhambo Ukusuka eRoma Ukuze Hlola Italy
ERoma sisixeko elihle, kodwa ngamanye amaxesha umhambi kunqwenelwa nentwana iintlobo. Abo yokuhlala eRoma elide ngokwaneleyo ukuba bacande kulo zinganqwenela mhlawumbi kujonga ejikeleza indawo, kakhulu. Ngethamsanqa, yiyo iihambo namhla ukuba! Ukuqwalasela nawo kakuhle ngayo iRoma ngololiwe kunye kwiindawo ezininzi, lo mceli kukukhetha apho ukuya. kunjalo, sizilungisile uluhlu ukukunceda wenze nje ukuba. Apha zi 5 Usuku Lokuhamba Ukusuka eRoma ukuya kuhlola i-Italiya nawuphi na umhambi uya kukonwabela!
1. A Trip Usuku To laseOstia Antica
laseOstia Antica i yokuhlala mandulo malunga 30km ukusuka eRoma. Emva ngemihla Antiquity, le dolophu kwakukho izibuko enkulu eRoma kwaye kukho ezininzi ukubona apha. Njengokuba, you can take a look at the public baths with beautiful mosaics.
Ngaphezu, kukho kwakhona yemidlalo yeqonga kunye kwisitrato esikhulu. Uqhekekile ziqulathe kumabhodlo iitempile ezimbalwa ezibalulekileyo, ezifana lowo ezinikele uMofokeng.
Enye Uhambo Day ukusuka eRoma ukuba siphakamisa ukuba Tivoli, ukuphuma emzini oluthandayo waseRoma Hadrian kwi AD ngenkulungwane yesibini. wakha Hadrians Villa kule dolophu intle ekufuphi, leyo wagcina othanda ngaphezu yokuhlala eRoma.
Njengoko le ndawo kuthanjiswa ultimate, Hadrians Villa e Tivoli uye iigadi kunye namathala, yaye ekugqibeleni waba sixeko. Amabhotwe neetempile yinxalenye elichukumisayo olukhenketho, nto leyo eza kwenza uhambo imini yakho Tivoli kunomvuzo.
3. Uhambo Usuku Ukusuka eRoma To Bracciano
Itshakace off kuloliwe emva kweyure ende ukusuka eRoma, kwaye uya kube bafika Bracciano. le gorgeous town ephakathi kunxweme Bracciano Lake unemisebenzi ziwa ukuba anikele. Umzekelo, ungayibona i Orsini Odesalchi Castle, which was a residence of many nobles.
Yini ngaphezulu, le zemizi kwabangela kananjalo indawo apho Katie Holmes watshata Tom Cruise ngo 2006. Ngaphezu, ungayibona Braccianos Cathedral, elakhiwa ngexesha kumaxesha aphakathi.
Ekubeni idolophu okukhulu zembali, Naples i kufuneka atyelele ukuba nabani na ufuna ukuba ElamaTaliyane uhlasele Uhambo Usuku ukusuka eRoma. Views kweNtaba iVesuvius, izakhiwo emangalisayo, kwaye kufudumele, bendawo friendly ezinye iimpawu eziphambili esixeko. kunjalo, Naples nayo waduma kwazalelwa pizza Margherita. Kuthini okuthe vetshe, ungakwazi ukutyelela Pizzeria apho benza pizza yokuqala - Antica Pizzeria PortAlba.
Sicebisa lokugqibela Uhambo Suku eRoma yi Florence, abonakala ngathi sesona kancinci kude kakhulu ukuba uhambo losuku. kunjalo, kuba lula yaye ngokukhawuleza nge loliwe. kwaye nje ebona wembali, zobugcisa ingane iziko Florence liya kwenza i uhambo kunomvuzo. Duomo di Firence nguye Florence Cathedral odumileyo, leyo ngokugqibeleleyo libonisa inkangeleko endala dolophu. Ukutyelela Florence uhambo ngosuku ukusuka eRoma yindlela enkulu Ukuqukumbela iholide yakho.
Zonke ezi ndawo kufuphi eRoma ulingana ukutyelela. Ukuba ufuna uhambo ngosuku ogqibeleleyo, chola oyithandayo yakho, uye. Kulula!
Ulungele adventure yakho Italian? Apakishe iibhegi zakho, bacwangcise imisebenzi yakho zeholide, yaye Incwadi Yakho Ukuqeqesha Tickets ngexesha!
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “5 Usuku Uhambo Ukusuka eRoma Ukuze Hlola Italy” kwi sayithi yakho? ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye okubhaliweyo kwaye sinike nje ngetyala ngekhonkco kule post blog. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fday-trips-rome-explore-italy%2F%3Flang%3Dxh- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Imini yohambo ukuhamba-hamba travelitaly ukhenketho traveltips